Eritreana Maro Manao Vy Very Ny Ainy Amin’ny Fanandramana Mandositra Ny Fireneny, Inona No Antony? · Global Voices teny Malagasy
Eritreana Maro Manao Vy Very Ny Ainy Amin'ny Fanandramana Mandositra Ny Fireneny, Inona No Antony?
Voadika ny 16 Septambra 2016 3:07 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Ελληνικά, Español, русский, Português, Français
Pikantsarin'ny fifhetsiketsehan'ireo mpitsoaponenana taorian'ny tatitry ny Firenena Mikambana momba ny zon'olombelona any Eritrea. Lahatsarin'ny africa news
Tamin'ny 2014, ny Eritreana no zom-pirenena faharoa niavian'ireo mpifindramonina tonga tao Eoropa. Nandritry ny lohataonan'ny 2015, ny firenen'izy ireo no fahatelo mpamatsy mpifindramonina tonga any Eoropa tamin'ny fiampitàna ny Mediterane. Anatin'ireo namoy ny ainy tamin'io fiampitàna io, maherin'ny antsasany no Eritreana.
Ny 8 Jona lasa teo ny Kaomisiona ao amin'ny Firenena Mikambana mpanadihady momba ny zon'olombelona any Eritrea no namoaka ny tatitra farany avy aminy, miampanga ny endrika tsy refesi-mandidy asehon'ny governemanta Eritreana, ny fidadasiky ny heloka bevava atao amin'ny maha-olona ao amin'ilay firenena izay toa fomba fanao mahazatra nandritry ny 25 taona.
Tamin'ny fanolorana ilay tatitra, nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety Atoa. Mike Smith, filohan'ny Kaomisiona mpanadihady avy amin'ny Firenena Mikambana dia nanambara hoe:
Firenena iray tsy refesi-mandidy i Eritrea. Tsy misy rafi-pitsaràna mahaleotena, tsy misy antenimieram-pirenena ary tsy misy andrim-panjakana demaokratika ao Eritrea. Niteraka fahabangàn'ny fitantanana sy ny maha-tany tàn-dalàna izany, izay mitarika rivo-piainana feno tsimatimanota manome vàhana ny fanaovana heloka bevava natao nandritry ny efa ho dimy amby roapolo taona. Mbola miseho lany hatrany ireny heloka ireny hatramin'izao.
Tsy misy mba tena fanantenana marina hoe hitondra ireo nahavanon-doza tamin'ireny heloka bevava ireny hiatrika fitsaràna raha ny rafitra fitsaràna Eritreana.
Namadika an'i Eritrea ho toy ny fonja iraisana ny fanompoam-pirenena, toerana izay ahafahan'ny miaramila mitifitra izay olona miezaka ny handositra ny fireneny. Loharano: diplomatie.gouv.fr
Amin'ny fiteny tsy mahazatra ho an'ny antontan-taratasy iray navoakan'ny Firenena Mikambana, tsy miolankolaka ilay tatitra miteny miampanga ireo fanararaotana amin'ny endriny isankarazany manjo ireo Eritreana:
Araka io tatitra io, ny heloka bevava manetry ny olona ho toy ny andevo, ny famonjàna, ireo fanjavonana an-terisetra, ny fampijaliana, ny fanenjehana, ny fanolanana, ny famonoana ary ireo habibiana hafa dia natao tao anatin'ny sehatry ny fampielezankevitra miely patrana sy tsy mitsahatra, mikendry ny hametraka tahotra, handresy lahatra ny mpanohitra ary hifehy ny vahoaka sivily nanomboka tamin'ny nakàn'ireo manampahefana Eritreana ny fifehezana ny faritany Eritreana tamin'ny 1991.
Ny lahatsarin'ny TV Soisa, Geopolitis, eto ambany ary navoaka tao amin'ny Youtube, dia miezaka mamaly fanontaniana vitsivitsy :
Eritreana Maro Manao Vy Very Ny Ainy Amin'ny Fanandramana Mandositra Ny Fireneny, Inona No Antony? Inona no mitranga ao amin'io firenena tsy dia fantatra loatra io? Manome ny endrik'io firenena fadiranovana ao amin'ny Tandrok'i Afrika io ny Geopolitis.
Denise Graf, Coordinatrice asile, Amnesty International, vahinin'ilay fandaharana no manazava ireo fepetra iainana ao amin'ilay firenena, ny tsy fahazoan'ireo fianakaviana antoka ary ireo fahasarotana atrehana hahazoana ny sata maha-pitsoaponenana ao Soisa :
Tamin'ny 2014, nanodidina ny 7.000 ry zareo no nangataka hialokaloka tao Soisa. Ny Eritreana izao no manome ny isa betsaka indrindra amin'ireo mpialokaloka ao Soisa. Raha manerana an'i Eoropa, 46.000 ireo Eritreana mpangataka fialokalofana no voaisa. Araka ny tarehimariky ny Firenena Mikambana, an'aliny isaky ny mandeha no voaisa. Fandosirana faobe izay sarotra vinavinaina, indrindra fa firenena tsy dia fantatra loatra ihany koa i Eritrea. Firenena tanora izay nahazo ny fahaleovantenany tamin'ny 1993 taorian'ny telopolo taona niadiana tamin'ilay goavana mpifanolo-bodirindrina aminy, i Etiopia. Saingy heverina ho ny iray amin'ireo isan'ny tena mpamoritra indrindra eto ambonin'ny tany ny fitondrana misy ao an-toerana. Mitombo ny fisambontsamborana fahatany ary terena ny tanora hirotsaka hanao raharaha miaramila, izay indraindray tsy misy fitsaharany.
Tamin'ny anjarany, ao anatin'ny tatitra 2015/2016 avy aminy, ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakàna “Amnesty International” dia mamaritra ilay rafitra fanaovana fanompoana firenena sy ny manjo ireo zaza teraka ao amin'ilay firenena :
Mitohy voaporitra hatrany hanao fanompoam-pirenena an-tery, izay mety hitohy tsy misy fitsaharany ireo Eritreana. Mitovy amin'ny asa an-terivozona io rafitra io. Araka izany dia ampahany betsaka amin'ny vahoaka no terena hiditra ho miaramila mandritra ny fotoana tsy voafaritra, mety ho tonga hatramin'ny 20 taona…
Mitohy ny fandraisana ankizy hofanina hanao raharaha miaramila noho ny maha-tsy maintsy andanian'ny ankizy rehetra ny taona farany tokony ho vitainy any amin'ny lisea ao amin'ny toby miaramilan'i Sawa, izay anerena azy ireo hiaritra fepetram-piainana tena henjana sy fitondrà-miaramila, ary ofanina hikirakira fitaovampiadiana. Betsaka tamin'ny ankizy no nitsoaka niala ny sekoly noho ny tahotra an'io fanerena hiditra ho miaramila io. Raofina mandritry ny fanafihana ataon'ny tafika ihany koa ny ankizy marobe mba hanaraka fiofanana miaramila hitady ireo olona nandositra ny asa fanompoana firenena.
Tao anaty lahatsoratra iray Stefania Summermatter, nadika avy amin'ny teny Italiana ary navoaka tao amin'ny swissinfo.ch tamin'ny Septambra 2014, tao anatin'ny tetikasa “En Quête d’Ailleurs” (eqda), manoritsoritra ny zavatra iainan'ilay Eritreana mpialokaloka, Ing. Mebrathon :
Tamin'ny faha-16 taonany i Mebrathon no noraisina hiditra ho miaramila. «Tany am-piandohana, dia mpiambina teny an-tsisintany iraisana amin'i Etiopia no nametrahana ahy. Baiko hitifitra ireo izay manandrana ny handositra ny firenena no azonay. Niasa andro aman'alina aho, tamin'ny karama 450 naktfa, teo amin'ny 30 dolara teo». Ny voalohany indrindra nanandramany nandositra, vao teo amin'ny 30 mahery kely teo izy. Saingy azon'ny miaramila izy, nahiboka tanaty tranokely ambanin'ny tany ary nampijaliana. Mandrehitra sigara i Mebrathon ary mbola hita eny amin'ny hato-tànany ireo mariky ny rojovy.
Ao amin'ny lahatsoratra iray navoakan'ny bilaogy horizonsdumonde.mondoblog.org, Fabien Leboucq no manoratra momba ny toedraharaha ao Eritrea :
Hatramin'ny niafaràn'ny adim-panafahana nifanaovany tamin'i Etiopia, mbola miaina anaty fepetran'ny tany latsaka an-katerena hatrany ilay firenena. “Ny tafika sy ny mpitondra no manana ny fahefàna feno, ary mpamadika daholo no andraisana ireo mpanohitra” hoy ity avy amin'ny anjerimanontolo ity manohy. Ho azy, misy olona gadraina efa ho dimy ambin'ny folo taona, tsy notsaraina, noho ny nitakian'izy ireny hisianà fifidianana mifanaraka amin'izay voalazan'ny lalàm-panorenana. Tao anatn'ny dimy amby roapolo taona, tsy mbola nifidy velively ny ao Eritrea.
« Tsy misy ny fahafahana ara-politika, ara-pivavahana, ara-toekarena, ary mba hialàna amin'ny fanompoam-pirenena, lasa manao fangalampiery na mandositra ny olona. » Azon'i Alain Gascon antoka tsara izany : ny fanompoam-pirenena, izay efa nisy hatramin'ny nahaterahan'ny Firenena Eritreana, no isan'ny antony iray lehibe amin'ny fiporitsahan'ireo mpifindra monina misy ao amin'ny firenena amin'izao.
Tsy ny olontsotra ihany no mitady izay fomba rehetra sy manao vy very ny ainy handosirana. Eny tokoa, ampahatsiahivin'i Franck Gouéry ao anaty lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny tranonkala amnesty.fr fa:
Taona roa lasa izay, tao anatin'ny Lalao Olaimpika tao Londona indrindra no nitsoa-pahana tsy hita nanjavonana ilay mpanao hazakazaka lavitra ezaka sady mpitondra fanevan'i Eritrea, Weynay Ghebreselasie. Tamin'ny 2012, nanararaotra ny fitsidihana arak'asa tany Alemaina ny minisitry ny fampahalalam-baovao mba handosirana ny fireneny. Io taona io ihany, mpanamory roa tao amin'ny Tafika Mpiaro ny Habakabaka Eritreana no niala an-daharana nitondra ny fiaramanidin'ny filoham-pirenena ka nametraka izany tany Arabia Saodita
Ny 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, nandritra ireo fifaninanana iraisampirenena, mpikambana tao amin'ny ekipam-pirenena mpilalao baolina kitra no nanao izay hahavoasazy azy ireo tsy ho afaka manohy ny lalao, ho fanatanterahana tanjona hafa mihitsy: hangataka fialokalofana politika. Tamin'ny fomba hafakely no nandosiran'izy ireo an'i Eritrea. Saingy tsy ny Eritreana rehetra no hanana vintana hahita fomba tsotra tahaka izany handosirany.
Toy ny tany miady isanandro no iainan'i Eritrea miaraka amin'ireo firenena roa hany mpifanolo-bodirindrina aminy, Etiopia sy Djibouti.